श्रीमानकाे भाग्य चम्काउन यस्ताे गर्नुहाेस – Paluwa Khabar
सोमबार , अषोज ११, २०७८
श्रीमानकाे भाग्य चम्काउन यस्ताे गर्नुहाेस
कार्तिक १३, २०७७ बिहिबार 26
काठमाण्डाै कार्तिक १३ । धर्म शास्त्रमा पत्नीलाई पतिको जाेडि वर पिपल भनेर चिनिन्छ, यी जाेडी सात जन्मसम्म टुट्दैनन् । पत्नीको भाग्यको पतिको भाग्यमा केहि ग्रहहरु बिग्रिन सक्छन्, त्यसैले भनिन्छ कि विवाह पछि कुनै कुनै मात्र व्यक्तिको भाग्यमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ तर । कसैकसैको चाहिँ यसले झन् नराम्रो प्रभाव पारेको पनि हुनसक्छ ।
यदि कसैको विवाहपछि पनि भाग्य चम्किएको छैन भने यस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ जसले मानिसको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । भारतका पण्डित शिवकुमार शर्माले पनि त्यस्ता उपाय सुझाएका छन् जसका कारण पतिको भाग्यमा पत्नीका कारण परिवर्तन आउन सक्छ । शास्त्रमा स्त्रीलाई लक्ष्मीको दर्जामा राखिएको छ ।
उनलाई लक्ष्मी स्वरुप मानिने गरिएको छ । त्यसैले स्त्रीले विहान सधैं पूजापाठ गर्नु राम्रो हुन्छ । यसले पतिको जीवनमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिन्छ। घरमा महिलाले विहान उठेर सबैभन्दा पहिले स्नान गर्नु अवाश्यक छ ।
साथै, तुलसीलाई पानी चढाएर उनीहरुले आफ्नो दुःख हटाउनका लागि प्रार्थना गर्नु पर्ने हुन्छ । शिवकुमारका अनुसार घरमा तामाको भाँडामा पानी राखेर पूरै घरमा छर्कनाले घरको वातावरण शुद्ध हुन्छ र यसले नकरात्मक शक्तिलाई हटाउन सहयोग गर्छ । अनि यसले घरमा समृद्धि ल्याउँछ ।
Prevगुलरिया नगरपालिकाले निर्माण गरेकाे डम्पिङ साईड (फाेटाे फिचर)
Nextचर्चित अभिनेत्रि रंगेहात पक्राउ
परिक्षाको तयारीमा रहेका देशैभरिका विद्यार्थीहरुका लागि आयो अत्यन्तै जरुरी सुचना ,सबैले पढ्नै पर्ने
साउन १ गते देखि कर्मचारी को तलब यति धेरै हुने प्रधानमन्त्री ओली को घोषणा
भर्खरै सरकारले टिकटक बन्द हुने बारे जारी गर्यो यस्तो सुचना
हेर्नुहोस भिडियो- भागिरती भट्टको फेसबुकमा भेटियो नसोचेको यस्तो प्रमाण
एक्कासी फेरी लकडाउन हुने मिती तोकियो, यति गतेबाट पुन देशमा लकडाउन सुरू हुँदै (447)
शिक्षकले राजनीति गरे जागिरै चट् पार्ने गरि यस्तो बन्यो कानून , पढ्नुहोस कानुन? (291)
मास्टर माइन्ड प्रचण्डलाई देउवाले दिए सरकारको सबै जिम्मा, माओवादीबाट नयाँ राष्ट्रपति को ? (284)
आजदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, कस्को कति तलब वृद्धि ? (279)
माओवादी केन्द्रमा भुइँचालो , सोह्र सांसद एमालेमा प्रवेश ! नामावली सहित (270)
भर्खरै बिमान दु’ र्घटना हुँदा प्रधानमन्त्री सहित ११ जनाको मु’ त्यु , मनमा माया भए RIP लेख्नुहोला (261)
अब बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैक्षिक भत्ता, यसरी प्राप्त गर्नुहोस्? (236)
पर्यटनमन्त्रीमा प्रेम आले (235)
भोलि राती १२ बजे देखि लागू हुने गरी अदालतले लगायो टिकटक माथि प्र’ तिबन्ध
भोलि राती १२ बजे देखि लागू हुने गरी अ,दालतले लगायो टिकटक माथि प्र’ तिबन्ध
आगोलागिमा परि देउवा को मृ’ त्यु
१.	दुबै छोराहरुलाइ फाँ,सी नदिए आफैले झु,ण्ड्या,र मा,र्ने भन्दै जङ्गिए लोकबहादुरको बुबा (भिडियो हेर्नुस्) (51)
२.	जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउदै आएका १८ राउटेको मृ’त्यु (47)
३.	लोकबहादुर कार्कीका बाउ र भाई, खड्गबहादुरका बाबुछोरा मिलेर तेजबहादुरको परिवारको ह,’त्या (46)
४.	संखुवासभा ह,त्या का,ण्डमा ९ जना प,क्राउ परे जसमध्य ४ जना निर्दोष ठहरिए,हेर्नुस् ह,त्यारा र निर्दोष अनुहार (भिडियो हेर्नुस्) (46)
५.	एक्कासि काठमाडौंमा के भयो यस्तो राता रात सबैले किन उपत्यका छोडदै छन ? (46)
६.	आमालाई बचाउने क्रममा छोराको मृ’त्यु (43)
७.	अन्तिम दिन भद्रकालीमा धर्ती माताले देखाइन कालीको राक्षसी रुप, प्रहरीकै अगाडी गरिन यस्तो ताण्डब ! (41)
८.	आज राती १२ बजे देखि लागू हुने गरी NTC ले ल्यायो अहिले सम्मकै सस्तो डाटा अफर ! (40)